August 2017 - Sawirrotv
Madaxweyne Farmaajo oo Maanta Wacdaro ka Dhigay Xeebta Liido (VIDEO)
Madaxweynaha Dowladda Federaalka ee Soomaaliyamudane, Maxamed C/laahi Maxamed (Farmaajo) ayaa gelinkii dambe ee maanta booqasho kadis ah ku tagey Xeebta Liido ee Magaalada Muqdisho. Ammaanka xeebta Liido iyo haraaraheeda ayaa maanta aad loo adkeeyay, Ka hor intii aanu Madaxweynaha Soomaaliya soo gaarin halkaasi. Madaxweyne Farmaajo ayaa waxaa la arkayay isagoo si caadi u dhex gelaya …
Madaxweyne Farmaajo & Xeebta Liido (VIDEO)
Ammaanka xeebta Liido iyo haraaraheeda ayaa maanta aad loo adkeeyay, Ka hor intii aanu Madaxweynaha Soomaaliya soo gaarin halkaasi. Madaxweyne Farmaajo ayaa dhalinyarada qaar xaaladooda ka wareystay, sidoo kalana waxa uu wax ka weydiiyay arrimaha ammaanka iyo hannaanka shaqo ee dowladda hada jirta.
Madaxweynihii Hore ee Hirshabelle oo Isaga Cararay Xamar, Dowladana Eedeyn Kulul u soo Jeediyay (VIDEO)
Madaxweynihii hore ee maamulka Hirshabelle Cali C/laahi Cosoble ee kalsoonida lagala noqday ayaa maanta gaaray Magaalada Baledweyne ee Xarunta Gobolka Hiiraan, ka dib markii uu cararay Magaalada Muqdisho. Xildhibaanada Baarlamaanka maamulka Hirshabelle ayaa 14-kii bishan kalsoonida kala noqday Madaxweyne Cosoble, ka dib kulan deg deg ahaa oo ay ku yeesheen Xarunta kmg-ah ee maalmulka Hirshabelle …
Madaxweyne Cosoble oo Gaaray Baledweyne (VIDEO)
Xildhibaanada Baarlamaanka maamulka Hirshabelle ayaa 14-kii bishan kalsoonida kala noqday Madaxweyne Cosoble, ka dib kulan deg deg ahaa oo ay ku yeesheen Xarunta kmg-ah ee maalmulka Hirshabelle ee Magaalada Jowhar. Cali C/laahi Cosoble ayaa waxa uu Madaxda Dowladda Soomaaliya ku eedeeyay inay soo fara-geliyeen Maamulka Hirshabelle, isla-markaana ay ka shaqeeyen sida aan sharciga ahayn ee …
Weerarkii Wiilka Soomaaliga ee Brussel (VIDEO)
Wiilka Weerarkan geystay ayaa la sheegay inuu yahay nin Soomaali ah oo 30 sano jir, kaasi oo mindi ku weeraray ciidamo roondo ka waday bartamaha magaalada Brussels. Soomaaligan ayey Booliiska sheegeen inuusan horey ugu jirin dadka ay isha ku hayaan ee lala xariirinayo falalka argagaxisada, dadka yaqaanayna waxay sheegeen inuu ahaa qof caadi ah oo …
Madaxweyne Farmaajo oo Maanta Dib Ugu soo Laabtay Magaalada Muqdisho (VIDEO)
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Faderaalka ee Soomaaliya Mudane, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta soo gaaray Magaalada Muqdisho, halkaasina ku soo gaba gabeeyey booqashadii rasmiga ahayd ee uu ku joogay dalka Masar labadii maalmood ee la soo dhaafay. Madaxweynaha iyo wafdigii la socday ayaa maanta duhurnimadii soo gaaray garoonka Aden Cade International ee magaalada Muqdisho, iyadoo halkaasi uu …
Madaxweynaha iyo Wafdigii la Socday (VIDEO)
Madaxweynaha iyo wafdigii la socday ayaa maanta duhurnimadii soo gaaray garoonka Aden Cade International ee magaalada Muqdisho, iyadoo halkaasi uu madaxweynaha Sharaxaad gaaban kaga bixiyay booqashadii uu ku tegay dalka Masar. Madaxweyaha Jamhuuriyadda ayaa uga mahadnaqay dowladda iyo shacabka Masar sida diiran ee ay ugu marti galiyeen dalkaas isaga iyo wafdigiisa, waxa uuna sheegay in …
Ciidamo Cusub oo ka Socda Dalka Burundi oo Soo Gaaray Magaalada Muqdisho (VIDEO)
Waxaa magaalada Muqdisho soo gaaray ciidamo cusub oo ay Dowladda Burundi u soo dirtay dalka Soomaaliya, ciidamadan ayaa oo bedel u ah ciidan kale oo dalkaasi ka socday kuwaasi oo dhameystey mudadii ay ogolaanshaha u haysteen inay ka hawlgalaan gudaha dalka Soomaaliya. Guutadan 45aad ee Ciidanka Nabad Ilaalinta Burundi ayaa soo gaartay Magaalada Muqdisho, waxaana …
Guutadan 45aad ee Ciidanka Burundi (VIDEO)
Guutadan 45aad ee Ciidanka Nabad Ilaalinta Burundi ayaa soo gaartay Magaalada Muqdisho, waxaana si kmg ah loo dejiyay Xarunta ciidamada Amisom ay ku leeyihiin deegaanka Xalane. Ciidanka cusub ee soo gaaray Magaalada Muqdisho ayaa waxaa hogaaminaya Korneyel Hatungimana Philbert, iyadoona uu qorshuhu yahay in la geeyo Magaalada Jowhar ee Xarunta Maamulka Hirshabelle, si ay si …